Email Mmasị Center na wepu aha na peeji nke: Iji Ọrụ vs. Publications | Martech Zone
Ebe Mmasị Email na Wepu aha peeji: Iji Ọrụ vs. Publications
Na Tọzdee, Septemba 29, 2020 Na Tọzdee, Septemba 29, 2020 Douglas Karr
Maka afọ gara aga, anyị na ụlọ ọrụ mba na-arụ ọrụ na mgbagwoju anya Salesforce na Mgbasa ozi igwe ojii Mbugharị na ntinye. Ná mmalite nke nchoputa anyị, anyị kwuru ụfọdụ isi okwu gbasara ihe masịrị ha - nke sitere na arụmọrụ arụmọrụ.
Mgbe ụlọ ọrụ ahụ mere mkpọsa, ha ga-emepụta ndepụta nke ndị nnata na mpụga ikpo okwu ahịa email ha, bulite ndepụta ahụ dị ka listi ọhụrụ, hazie email ahụ ma ziga na ndepụta ahụ. Nsogbu dị na nke a bụ nke setịpụrụ na nsogbu ole na ole:
Peeji ahụ wepu aha bụ ọtụtụ ndepụta na aha ndị na-enweghị omume enyi nke ndị na-edebanye aha na-enweghị ike ịghọta.
Ọ bụrụ na onye nnata ahụ pịrị aha na email ahụ, ọ bụ naanị wepu ha na ndepụta ahụ e mere ka ọ banye ọhụrụ, ọ bụghị site na ụdị nkwukọrịta nke onye debanyere aha ahụ chere na ọ bụ na ọ debanyere aha na ya. Nke ahụ bụ ahụmịhe na-akụda mmụọ maka ndị debanyere aha gị ma ọ bụrụ na ha anọgide na-anata ozi-e ndị ọzọ nke ụdị ahụ.
Site na ọtụtụ ndepụta na peeji nke wepu aha, ndị nnata ga-abanye na a nna ukwu wepu aha ya kama nke ụdị nke nkwukọrịta. Yabụ, ị na-efunahụ ndị debanyere aha nke nwere ike ịrapara ma ọ bụrụ na iweghị ha na mmasị ndị a haziri maka arụmọrụ gị karịa site na mkpali na ọdịmma ha.
Organihazi Ọrụ Email Gị
Ọ bụ ezie na CRM dị elu na ndị na-enye ọrụ email na-enye ohere iji wuo ma mepụta ebe mmasị ọdịnala nke nwere ahụmịhe dị ịtụnanya services obere ọrụ ga-eji ndepụta iji hazie ibe mmasị nke onye debanyere aha gị ma ọ bụ wepu aha na ibe.
Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike chepụta gị onwe gị na peeji nke, ike gị anatara site na ụtụ magazin si ele ihe anya site ụdị nke nkwukọrịta nke ị na-eziga. Ndepụta nwere ike ịbụ onyinye, ịkwado, akụkọ, ndụmọdụ na aghụghọ, kedu ka ị ga - esi mee ya, mkpu, nkwado, wdg. Thiszọ a, ọ bụrụ na onye debanyere aha achọghị ị nweta ọtụtụ onyinye - ha ka nwere ike ịbụ edeba aha na ebe ndị ọzọ nke mmasị mgbe wepu aha onwe ha kpọmkwem site na ndepụta onyinye.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, jiri atụmatụ nke ikpo okwu email n'ụzọ kwesịrị ekwesị:
anatara - bụ isiokwu na ọdịdị ma na-enye ndị debanyere aha wepu aha na ụdị nke nkwukọrịta. Ihe Nlereanya: Enyele
agba - bụ ndọtị ngalaba nke ndepụta ịchọrọ iji nke ọma maka ịchedo. Ihe Nlereanya: Ndị ahịa 100 kacha elu
Campaigns - bụ izipu ozi na otu ma ọ bụ karịa na / ma ọ bụ ndepụta. Ihe Nlereanya: Onyinye Enyemaka nye Ndị Ahịa Dị Elu
N'aka ozo, oburu na m choro iziga ndi mmadu ndi jiri ihe kariri $ 100 na ahia ahia m na aho a, aga m eme:
tinye a ebe data, 2020_Agba, na Ndepụta Enyemaka M.
Import ego ejiri onye ọ bụla debanyere aha gị na ikpo okwu email gị.
Mepụta nke, Emefu ihe karịrị 100 na 2020.
Mepụta ozi m maka onyinye a mkpọsa.
Ziga m mkpọsa na kpọmkwem nke.
Ugbu a, ọ bụrụ na kọntaktị chọrọ iwepu aha ha, a ga-ewepụ ha na Ndepụta EnyemakaKpọmkwem arụmọrụ anyị chọrọ inwe.
Iwulite ferencelọ Ọrụ Mmasị Dabere na Ọrụ
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ma wuo ụlọ ọrụ mmasị gị nke na-enye ahụmịhe kachasị mma:
Mata nke ọrụ na mkpali nke ndị debanyere aha gị wee wuo ọkọlọtọ ndị ahụ ma ọ bụ nhọrọ gị njikwa mmekọrịta ndị ahịa ikpo okwu. E kwesịrị itinye n'ọnọdụ na personas n'ime nzukọ gị.
Chepụta a ihu mmasị nke ahaziri onye debanyere aha ya na uru na atụmanya nke ịbanye na isiokwu ahụ ma ọ bụ mpaghara mmasị ga-enye. Gwakọta peeji nke mmasị gị na CRM gị ka ị nwee ogo ogo 360 maka ọdịmma ndị ahịa gị.
Jụọ onye debanyere aha gị Kedu ugboro ole ha chọrọ ka agwa ha okwu. Nwere ike iji kwa ụbọchị, kwa izu, izu abụọ, na nkeji ugboro atọ iji melite njide ndepụta gị ma zere ndị debanyere aha na-ewe iwe na ha na-anata ọtụtụ ozi.
Jikọta nke gị ahia ikpo okwu nke mere na isiokwu ndị ahụ bụ nke edepụtara aha na ị nwere ike ịkekọrịta ma zigara ha mkpọsa, ma jikwaa kọntaktị gị ma kwado usoro maka mkpali nke onye debanyere aha.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere data ihe ejikọtara na CRM gị ma mekọrịta ya na ikpo okwu ahịa gị iji mepụta, hazie, ma ziga ya na ezubere iche ngalaba n'ime ndepụta gị.
Nye a nna ukwu wepu aha ya na ọkwa akaụntụ yana ọ bụrụ na onye debanyere aha chọrọ ịpụ na nkwukọrịta niile metụtara ahịa.
Tinye nkwupụta na onye nnata ka ga-eziga azụmahịa nkwukọrịta (nkwenye ịzụta, nkwenye mbufe, wdg).
Tinye ego gị amụma nzuzo tinyere ozi ojiji data ọ bụla na ibe mmasị gị.
Tinye mgbakwunye ọwa nke nkwukọrịta, dịka nzukọ ndị mmadụ na-ezigara ndị mmadụ, ihe ngosi SMS, na ibe mgbasa ozi mmekọrịta ị ga - agbaso.
Site na ịhazi na iji ndepụta, ngalaba, na mkpọsa dabara adaba, ị gaghị eme ka ọrụ ndị ọrụ email gị dị ọcha ma hazie, ị nwekwara ike meziwanye ahụmịhe ndị ahịa maka ndị debanyere aha gị.
Tags: CampaignsCRMemail metrikonye na-enye ọrụ emailanataraahia igwe ojiindị ahịapeeji ndenye aha
Hopin: A Virtual Venue Iji Mbanye Njikọ Gị Online Ihe
TxTFi: Kwado Shopify Reordering Via Text Message